talooyin resume: Raac 10 Talooyin in la sameeyo resume weyn | Refugee Center Online
Ma rabtaa in aad shaqo wanaagsan ka heli? Waxaad u baahan tahay resume weyn. Daawo this video si ay u bartaan 10 Talooyin for resume weyn.
Talooyin Guud resume: Raac toban talooyin si ay u sameeyaan resume weyn.
Waa maxay resume?
Waa qoraal in aad la abuuro in details macluumaad aad xiriir, shaqada aad rabto in aad, Shahaadooyinkaada, waayo-aragnimo shaqo, Aasaaskii hore ee waxbarashada iyo macluumaadka kale ee in la yidhaahdo sababta aad u qalma jagada.
Your resume waa waxa ugu horeeya ee shirkadda eegi doonaa marka ay go'aansadaan haddii ay doonayaan inay aad waraysi shaqo ama ka fiirsan aad shaqaaleynta inay ka shaqeeyaan oo ay shirkadda. Shirkadaha heli boqolaal resume. Marka qof eegayaa aad resume, aad qabtid ee ku saabsan 10 seconds inuu soo jiito qofka in. Codsayaasha loo shaqeeyaha uu rabo in uu barto ee adiga kugu saabsan oo aan kula shaqeeya aad. Hubi in ay isticmaalaan erayga “I”, halkii “anaga”. looma isticmaali karo in aad hadalka ku saabsan naftaada. Si kastaba ha ahaatee, waa qayb muhiim ah oo habka shaqo baadhista ee America.
qaxootiga iyo doolka badan waxay leeyihiin waayo-aragnimo iyo xirfado badan leh, laakiin waxay u baahan yihiin resume ka fiican.
Toban talo samaynta resume weyn
halkan waxaa ku qoran 10 waxyaabo aad sameyn karto si ay u caawiyaan hubi in aad resume tagaa gelin raso "Good".
1. Qaybta sare ee aad resume magacaaga waa mid aad u muhiim ah!
Hubi waa ay fududahay in la akhriyo. Geesi magacaaga iyo tixgelin isticmaalaya version a soo gaabiyey of your name in hawl-shaqeeyayaasha inuu wax akhriyo. Ha ku darin magacaaga dhexe, gaar ahaan haddii ay tahay muddo dheer.
2. Hubi in aad isticmaasho ah "American" lambarka telefoonka iyo email address.
Mararka qaarkood, qaxooti ah ama soo galooti isticmaali tirada WhatsApp ama tirada International. Isticmaal laga xoreeyo dalka ah. lambarka taleefoonka iyo qori la isticmaalayo qaabka caadiga ah ee laga xoreeyo dalka ah. taas oo u dhaco sida tan- code degaanka ee parentheses, saddex lambar oo marka hore, markaas dumisaan a, ka dibna afar lambar ee ku xiga:
Isticmaal nooca dib-u-fudud oo, cinwaanka email US. Ha isticmaalin cinwaan email ah in uu dhamaado sida waddan shisheeye: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr halkii, isticmaali fudud si loo nooca laga xoreeyo. cinwaanka emailka. Tusaale ahaan: mo.ali@gmail.com. Xusa markaan si loo hubiyo cinwaanka email this! Fikrad wanaagsan waa in mid ka mid ah cinwaanka email in aad isticmaasho oo dhan codsiyada shaqada.
3. Isticmaal qaabka a arrintaasna waa u fududahay in ay si deg deg ah dib u eegis.
Taas macnaheedu waxa weeye in la hubiyo wax kasta waa u fududahay in la fahmo. Waxaad ku samayn kartaa adigoo isticmaalaya qaab isku mid ah iyo aag kasta oo hubinaya khadadka wax kasta oo kor. Waxaad kala soo bixi kartaa template ah resume free on our website halkan (ku dar link).
4. Saar shaqada ama iskaa wax u qabso waayo-aragnimo ku salaysan US sare ee resume ah.
Waxaa muhiim ah in ay ka shaqeeyaan Mareykanka waxaa ka mid ah waayo-aragnimo. Haddii aadan haysan wax laga xoreeyo. waayo-aragnimo shaqo, fiirsan tabaruca ama interning ee laga xoreeyo. shirkadda si aad u hesho xoreeyo. waayo-aragnimo. Waxaad kaloo qaadan kartaa fasalada online lacag la'aan ah si ay u kordhiyaan aqoontaada iyo waxaa ka mid ah aad resume.
5. Waxaa ka mid ah xirfadaha luqadda laakiin ma waxaa ka mid ah English
Qor wax kasta oo aad ku hadasho luuqado, oo ay ku jiraan haddii aad kaliya ku hadli ama qori oo ku qoran luqado kuwa. Laakiin, ma waxaa ka mid ah English. Waxaad tusi in aad tahay si fiican ugu Ingiriisi by isagoo resume wanaagsan la naxwaha habboon, xarfo, iyo formatting.
6. U hubso in aad ka mid ah aad waayo-aragnimo tabaruc.
qaxootiga iyo doolka badan ma ka mid ah habab badan waxay kaa caawin bulshadooda. Tusaale ahaan, qaxooti badan, waxaynu og nahay turjumi doono xubnaha kale ee bulshada. Waxay sameeyaan this kaliya inay yihiin nooca iyo sababtoo ah waa qayb ka mid ah bulshada. Waa inaad ku dartaa noocan ah iskaa wax u qabso ku saabsan resume. Waxa kaliya ma aha in aad ka mid ah waa marka aad ku caawiyaan qoyska adiga kuu gaar ah.
7. Isticmaal caasimadaha iyo fal
Noqo mid aad u taxaddar leh capitalizations. Waxaad u baahan tahay si aad u hubiso inaad balaariso oo dhan magac sax ah. magac ku habboon yihiin erayo kale oo magacyadooda, magaalooyinka, iyo shirkadaha. Dib aad resume iyo hubi in aad isticmaalayso xarfaha magacyada oo dhan, meelaha, shirkadaha. rasaas kasta waxaad u soo qori sharaxaya aad waayo-aragnimo waa in ay bilaabaan la fal ah (eray ku tilmaamay tallaabo ah). Tani waxay u xiiso badan in uu akhriyo. Waxa kale oo ay sheegaysaa shaqeeyaha waxa masuuliyadaada ahaayeen isla markiiba.
8. Hubi in aad resume waa wax ka badan laba bog
Your resume waa in ay ahaataa oo keliya hal dheereynta Baaragaraafka iyo waa dhan ku haboon on hal ama laba bog. Loo shaqeeyuhu ma akhriyi doonaa resume in ay yihiin in ka badan in.
9. Ugu dambeyntii, aad u hubiso in font waa isku mid u ah resume oo dhan.
Mid ka mid ah isbedel yar laakiin muhiimsan ee aad ka dhigi kara si loo hubiyo in dhammaan qoraalka aad resume waa font isla. Marar badan, marka aad samaynayso resume, gaar ahaan haddii aad nuqul qaybo ka mid ah qoraalka ka document kale, font ku filaan ah u beddeli laga yaabaa in. Waxa ay taasi wareer in ay eegaan. Si aad u hubiso font waa isku mid, nooca "ctrl + a". Marka dhammaan font la iftiimiyay, dooro font size iyo ka. laba wanaagsan, noocyada caadi ah in la isticmaalo waa: Times New Roman iyo Arial. Isticmaal ugu yaraan size 12 font si aad resume sahlan loo akhriyi karo.
10. Keydso resume sida PDF ah!
Haddii aad badbaadin aad resume sida document eray ama nooc kale oo ah dukumenti, waxaa laga yaabaa in aad isku dhexyaacsan. Waxaa fiican inaad u badbaadin sida file PDF ah si ay u eegi doonaa si sax ah sida aad u rabto in aad. Sidoo kale, hubi in aad leedahay version a badbaadiyey qaab Word iyo sidoo. Waxaad isticmaali kartaa version si itusi aad resume.
Talooyin dheeraad ah ee doorka heer-galo
Waxbarashada kaa caawin karaan sidii aad eegto sida shaqaale aqoon leh. Waxaa laga yaabaa inaad qaadatay koorsooyinka dugsiga halkaas oo aad horumariso xirfadaada waxaad isticmaali doontaa in aad shaqo. Haddii ay sidaas tahay, ku qor magacyada koorsooyinka ee waxbarashada. Waxaad samayn kartaa wax la mid ah la waraaqaha cilmi dheer ama mashaariic muhiim ah.
waayo-aragnimo Life waxtar yeelan karta inay taxaan sidoo. Xitaa haddii aad ka shaqeeya ama guriga, aad ku qori kartaan waxa xirfadaha aad loo isticmaalo. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah hooyooyinka joogista-at-home ka odhan kari waayeen in ay dheeli miisaaniyadda qoyska.
Iska ilaali gelinaya badan “xirfadaha jilicsan” in aad resume. Tani waxay ka dhigan tahay in aanad diiradda on sifaadka shakhsiyeed aad. halkii, xoogga saaraan waxyaabaha aad sameeyey ama xirfadaha aad ka baratay. Waxaad samayn kartaa dhowr jeer laakiin aan ka badnayn in. Tusaale ahaan, fogaado leh in aad tahay “friendly”, ama “qof ku faraxsan”.
Iyada oo ku saleysan aad waayo-aragnimo, naftaada siin horyaalka ah ee aad resume. Tusaale ahaan, haddii aad shaqeysay dugsiga halkaas oo aad ka qaaday daryeelka oo wax ku baray carruurta yaryar, aad noqon lahaa a “macallinka” ama “xirfadeed waxbarashada carruurnimada”.
Talooyin dheeraad ah ee doorka xirfadeed
Your resume waa in aanay noqon muddo ka badan 2 pages, xitaa haddii aad ka shaqaynaysay muddo dheer. Kaliya waxaa ka mid ah la soo dhaafay 15 sano oo aad waayo-aragnimo shaqo.
Haddii aad galay dugsiga in caanka ku ahaa ama adag si aad u hesho, loo hubiyo in aad ku darto in aad “waxbarashada” qaybta.
List guulaha iyo sidoo kale hawlaha ay ahaayeen. Haddii aad shaqeysay mashruuc cajiib ah, sii in yar oo faahfaahsan ah oo ku saabsan. Tusaale ahaan waxay noqon lahayd mashruuc aad shaqeysay in uu ahaa mid aad u qaali ama meesha aad ku lahaa si ay u maareeyaan dad badan.
Halkan waxaa ah template resume waxaad isticmaali kartaa in la abuuro aad resume.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tusaale ahaan resume:
Bhutanese Female arjiga Tusaale
Karen Lab arjiga Tusaale
Soomaali Female arjiga Tusaale
Customization resume: sida si ay u abuuraan resume shaqo-gaar ah
Shirkadaha isticmaalaan nidaamka raadraaca resume in shaandhayso codsiyada shaqada. Shaqooyinka badankood, Dad aan la reading aad resume. MostInstead, computer ah ayaa doonaya in uu arko haddii erayada aad resume dhigma sharaxaadda shaqada. shaqo A posted caadi helo boqolaal codsiyada.
Tan iyo markii aad resume dib loo eego by computer ah, aad leedahay si aad u hubiso in aad la abuuro resume shaqo-gaar ah. Taas macnaheedu waa in mar kasta oo aad ka codsan, aad u baahan tahay si aad u hubiso sharaxaadda shaqada iyo waafaqayaan resume in ay. Si kastaba ha ahaatee, a resume gaar ah shaqo ma aha in waxaa ka mid ah inuu eray walba oo ka sharaxaadda shaqada. Raadi keywords. Erayada furaha u tahay erayo iyo odhaaho loo isticmaalo inta badan. keywords badan ayaa hoos ku qoran “xirfadaha loo baahan yahay” qaybta. Tusaale ahaan, haddii aad codsanayso in ay ku xigeenka maamulka, aad dareento in erayo kale “xereynta”, “samaynta ballamaha”, iyo “jadwalka” isticmaalaan badan.
Qoraalka ah resume gaar ah shaqo ku lug leh laga yaabaa in erayada ay u si kale loo dhigo beddelo leh macnaha aad u la mid ah. Tusaale ahaan, laga yaabaa in aad la codsanayso shaqo oo doonaya ah "qoraa content" marka aad hore uga soo shaqeeyay sida a "abuure content." Tusaale kale laga yaabaa in lagu beddelo weedha ah “fiiriyey shaqaalaha cusub” in “shaqaalaha ay qorteen”.
Marxaladani waxay qaadataa waqti iyo dhaqanka. Habka ugu fudud si ay u bilaabaan waa inay daabacdo sharaxaadda shaqada. Qaado waqti qaar ka mid ah oo loo muujiyo oo hoosta ka xariiqay erayo aad u malaynayso in ay muhiim u yihiin iyo in la hubiyo in ay iyaga ku dar aad resume. Xusuusnow in daacadnimo waa muhiim. Ha ku darin wax xirfadaha in aadan haysan exprience la. website A waxtar u leh habkan waxaa loo yaqaan jobscan.co. Waxaad gali kartaa resume iyo shaqo description iyo arko haddii aad qabto kulan ku filan ama u baahan tahay inaad wax badan ka qaban.
Waxaan rajaynaynaa talooyin resume, kuwaas oo aad ka caawiyay. Hadda oo aad baratay sida loo sameeyo resume weyn, waa wakhti si aad u hesho diyaar u ahayn waraysiga shaqada.
Baro sida loo qabto wareysi shaqo weyn.